Times24 Nepal » नेकपा अध्यक्षबाट प्रचण्डले राजिनामा दिने ! पढ्नुहोस।
नेकपा अध्यक्षबाट प्रचण्डले राजिनामा दिने ! पढ्नुहोस।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले अन्तिम पटक आफ्नो तर्फबाट विवाद मिलाउन प्रयास गर्ने र त्यसमा संभव नभएमा आफूले राजिनामा दिने तयारीमा रहेको आफू निकटका नेताहरुलाई जानकारी गराएका छन् । त्यस विषयमा आजै आफू निकटका दोस्रो तहका नेताहरुको साथसाथै वरिष्ठ नेताद्धय माधव नेपाल र झलनाथ खनालसंग पनि छलफल गर्न सक्ने बताइएको छ । आफूले राजिनामा दिएपछि ओली माथि दवाव बढ्ने र उनले पनि कम्तिमा पार्टी अध्यक्षबाट राजिनामा दिने विश्वांसमा प्रचण्ड रहेको उनी निकटका नेताहरुको भनाइ छ । ओलीलाई मात्र होइन प्रचण्डलाई समेत पदलोलुपताको आरोप लागिरहेकोले त्यसलाई खण्डन गर्नको लागि राजिनामा दिएर त्यो आरोपको खण्डन गर्ने र ओलीमाथि नैतिक दवाव सृजना गराउने रणनीति रहेको एक जना नेताले जानकारी दिए।
यसलाई प्रचण्ड पक्षिय नेताहरुले एक कदम पछि हटेर दुई कदम अघि बढ्ने लेनिनको रणनीतिक योजनासंग तुलना गरेका छन् । ‘त्यसो भयो भने नेकपामा दुवै अध्यक्षले राजिनामा दिएर तेस्रो व्यक्ति अध्यक्ष हुने संभावना पनि छ । दुई अध्यक्षको इगोले दुवै जनाले राजिनामा दिएर अर्काे व्यक्ति अध्यक्ष भएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ’ उनले भने । यस बारेमा प्रचण्ड निकटकै नेताहरु पनि खुलेर बोल्न चाहिरहेका छन् । तर, प्रचण्ड निकट मानिएका र पछिल्लो समय पार्टी भित्रको विवाद मिलाउन सक्रिय रहेका नेता हरिबोल गजुरेलले भने पार्टी अध्यक्षबाट प्रचण्डले राजिनामा दिन लागेको कुरालाई पुष्टि गरेका छन् ।
विविसी नेपाली सेवालाई प्रतिकृया दिंदै गजुरेलले भनेका छन्–“मैले एक्लै भेट्दा अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टी एकता बचाउन र गतिरोध तोड्न अन्तिम अस्त्रको रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ। पछि पूर्वमाओवादीतर्फका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भेलामा पनि वहाँले केही उपाय लागेन भने हरिबोलजीले दिएको सुझाव प्रयोग गर्छु भन्नुभाथ्यो ।